विप्लव आउँदा हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ !’ – Khabar Patrika Np
विप्लव आउँदा हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ !’
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०१, २०७७ समय: २१:३१:५९
काठमाडौं । ‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पुरै बगायाे कि ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ !’
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बिच तीन बुँदे सम्झौता भएलगत्तै २०७७ फागुन २१ गते साँझ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राखेको जिज्ञासा हो यो । शर्माको यस्तो धारणापछि धेरैले विप्लवको हतियारबारे जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । तर त्यही हतियार बोक्ने सेनाबारे भने कसैले पनि चासो राखेको पाइँदैन । हतियार थिए कि थिएनन् र विप्वलका लालसेनाबारे सरकारले चासो नराख्दा विप्लवलाई भने राहत मिलेको चर्चा स्वयं यो पार्टीभित्र सुनिँदैछ ।
कति छन् विप्लवका सेना ?
२०७१ मंसिर २१ को केन्द्रीय समितिमा सहभागी भएपछि विप्लवले वैद्यबाट पार नलाग्ने निचोडका साथ सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग बाटो लिएका थिए । एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने घोषणा गरेका विप्लवले त्यसको केही समयपछि नै जंगल मात्र हाेइन तराइमा समेत लालसेना निर्माण थालेका थिए ।
श्रोतका अनुसार, विप्लवले यो बिचमा ९ वटा सैन्य व्युरो बनाएका छन् । एउटा व्युरोमा १५० सेना छन् । यस हिसाबले विप्लवसँग कम्तीमा पनि १३५० सेना छन् । ‘यहाँ केहीले हतियारको मात्र कुरा उठाएर हामीसँग रहेको सेनालाई छायाँमा पारेका छन्,’ विप्लवका एक नेताले भने ।
विप्लवका नेताले सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक र सदस्यको जिज्ञासामा हतियार नरहेको प्रष्टीकरण दिएको बताइएको छ । यही प्रष्टीकरणका कारण सरकारले हतियारको विषयलाई सम्झौताको बुँदामा नसमेटिएको बताइन्छ । तर विप्लवनिकट श्रोतका अनुसार, यो समूहले तयार पारेको सेनासँग सबैखाले हतियार छन् ।
श्रोत भन्छ, वार्तापछि विप्लवले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रतिबद्धता जनाए पनि सैनिक व्युरो मातहतमै ती हतियार राखिएका छन् । श्रोतका अनुसार, हतियार र सेनाको समस्या निकट भविष्यमा आउने खतरा रहेकाले विप्लव त्यसको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं छाड्ने तयारीमा रहेका छन् । ‘वैद्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको लामो समयसम्म सेना नबनाएको भन्दै दबाब परेपछि विप्लव समूहले बाध्य भएर सैन्य संरचना तयार पारेका थिए,’ श्रोतले भन्यो, ‘हिजो लड्न भिड्न भन्दै तयार पारिएको सेना अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या विप्लवका सामु खडा भएको छ ।’
वैद्य विप्लव एकतामा जाने सम्भावना
सरकार र विप्लव बिच वार्ताको चर्चा चुलिंदा विभिन्न अनुमानहरू गरिएका थिए । विप्लव र ओली बिच एकतादेखि सरकारमा सहभागी हुनेसम्मका हल्ला चले । तर ती सबै अनमानहरू गलत भएको विप्लव समूहले प्रष्ट पारिसकेको छ ।
वार्ता प्रक्रियामा आउनुलाई विप्लवमा आएको विचलन पनि भनेका छन् कतिपयले । तर विप्लव समूहको कार्यनीति बदलिए पनि कार्यदिशा भने बदलिएको छैन ।
विप्लव र मोहन वैद्यलगायतका केही कम्युनिस्ट पार्टीको विचार र कार्यदिशा मिलेकाले अब यी शक्ति बिच एकताको सम्भावना बढेको छ । प्रतिबन्धकै समयदेखि एकताको प्रयास भएकाले अब थप सहज भएको वैद्य समूहका एक नेता बताउँछन् । पछिल्लो समय मोहन वैद्य किरण, आहूति, ऋषि कट्टेल र विप्लवले संयुक्त रणनीतिक मोर्चासमेत बनाएका छन् । २०७७ फागुन २२ गते शनिबार मात्रै यो मोर्चाका नेता र विप्लव बिच औपचारिक बैठक भएको थियो । यो खबर आजको साँघु न्यूजमा छ
२०७६ साल फागुन १ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनमुक्ति सेना निर्माण गर्न लागेको भन्दै भाग लिन र क्रान्तिमा सहभागी बन्न नेपाली युवाहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर, २०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकारसंग तीन बुँदे सम्झाैता गर्दा जनमुक्ति सेना बारे उनी माैन रहे । सरकारले पनि वास्ता गरेकाे जानकारी भएन।
२०७६ साल फागुन १ गते विप्लवले एउटा जनमुक्ति सेनालाई पूर्वसँग जोडेर, इतिहासको विषय बनाएर अबको क्रान्तिमा आक्रमण गर्नका लागि चलखेल भइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको पनि बताएका थिए । यूएन, भारत, कांग्रेस, एमाले र प्रचण्ड-बाबुराम मिलेर जनताको मुक्तिको लागि लडेको जनमुक्ति सेनालाई पूर्व बनाइदिएको भन्दै उनले जनमुक्ति सेना पूर्व हुने सेना नै नभएको दावी पनि गरेका थिए ।
विप्लवले भनेका थिए “एउटा जनमुक्ति सेनालाई पूर्वसँग जोडेर, इतिहासको विषय बनाएर अनि अब क्रान्तिमा आक्रमण गर्नका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने, क्रान्तिलाई आक्रमण गर्न जो खेल चलिरहेको छ अहिले त्यसलाई हामीले चिर्न जरुरी छ ।” उनले भनेका थिए- “जनमुक्ति सेना पूर्व होइन, पूर्व त कसले बनाइदियो भने यूएनले बनाइदियो । पूर्व त भारतले बनाइदियो । पूर्व त काङ्ग्रेस र एमालेले बनाइदिए । पूर्व त प्रचण्ड र बाबुरामले बनाए । हाम्रो त लगातार के छ भने जनमुक्ति सेना पूर्व हुने सेना होइन ।”
जनमुक्ति सेना भविष्य बोकेको र भविष्यको जिम्मा लिने सेना भनेको प्रष्ट पार्दै विप्लवले त्यसलाई पूर्व भनेर विषयान्तर गर्न खोजिदा त्यतिबेला नै आफूहरुले विरोध गरेको समरण पनि गरेका थिए ।
जनमुक्ति सेनालाई पूर्व भन्ने या नभन्ने बिषयमा तत्कालीन परिस्थितिमा पनि ठूलो बहस पनि चलेको उनले खुलासा समेत गरेका थिए । “एउटा सेनालाई लिएर अर्कोलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पारिदिने कुरा, सिध्याइदिने कुरा हुन सक्दैनथ्यो नि । त्यतिबेलै समायोजनका नाममा जनमुक्ति सेनालाई जसरी विसर्जन गरिँदै थियो त्यसै दिन हामीले विरोध गरेका थियौँ ।”
विप्लवले “पूर्व हामीले स्वीकार गरेको होइन । पूर्व भन्ने शब्द जो बनाउन खोजेका थिए, त्यो भएन । अहिले पनि जोडतोडले ल्याउन खोजिएको छ । अहिले फेरि मनोवैज्ञानिक रूपमा हमला गर्न खोजिँदैछ भने जनमुक्ति सेना थियो, कुनैबेला त्यो सकियो, त्यो मात्रै होइन ।”
पुँजीवादी, साम्राज्यवादीहरूले पूर्व जनमुक्ति सेनाको ब्याज खानु र खुवाउने उद्देश्यले फेरि अर्को खेल सुरु गरेको बताउदै महासचिव विप्लवले नेपालमा क्रान्ति नै सम्पन्न नभएको अवस्थामा जनमुक्तिलाई सेना पूर्व भनेर भन्नै नमिल्ने तर्क गरेका थिए। प्रचण्ड-बाबुरामले बिच बाटोमै छोडेर हिंडेको अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न नेपाल जनमुक्ति सेनालाई थप शशक्त बनाउनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ सार्वजनिक भएकाे थियाे ।
“यहाँ त जनमुक्ति सेना बनाउनु पर्नेछ, लड्नुपर्नेछ, ल्याउनुपर्नेछ नि । त्यसकारण वर्तमान जनमुक्ति सेना बनाउने कुराको महत्व छ भन्ने कुरा हामीले चिर्न खोजेको कुरा यो हो । अब जहाँसम्म बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो, यो विभिन्न ढङ्गले बाहिर गइसकेको हुनाले ढाँट्नुपर्ने जरुरी छैन ” उनले भनेका थिए- “हामी त्यतिबेलै पनि प्रचण्ड–बाबुरामसँग विद्रोह गरेर शिविरबाट जनमुक्ति सेनालाई बाहिर आउनलाई अपिल ग¥यो । आउनु पनि भो । आएपछि हामीले भन्यौँ– गठन गरौँ । हामीले विभिन्न सुरक्षाका जनस्वयम्सेवक गठन गर्ने कुरा पनि भयो ।”
महासचिव विप्लवले एकीकृत जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेना अपरिहार्य भएको पनि बताएका थिए । “एकीकृत जनक्रान्ति अहिले आफ्नै विशेषतामा अगाडि बढिरहेछ ।
त्यसभित्र जनमुक्ति सेनाको एउटा अवधारणा र संरचना हामीले बनाएका छौँ, लिएर गएका छौँ र एकदम सुदृढीकरणतिर जाँदैछ । यतिचाहिँ हामीले जनतालाई भन्नुपर्छ किनकि बाहिर भ्रमहरू चलिरहेका छन् । यसलाई चिर्नुपर्नेछ ।”
जनमुक्ति सेनाको एउटा अवधारणा र संरचना हामीले बनाएका छौँ-विप्लव, २०७६ साल फागुन १ गते